MW Xasan oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab | KEYDMEDIA ENGLISH
MW Xasan oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
MW Xasan waajibaadka ugu weyn ee hor yaalla waa wax ka qabashada amniga, waxaa lagu xasuustaa qorshihii miradhalay ee howlgalka Badweynata Hindiya, kaasoo xilligii uu madaxweynaha siddeedaad aha degaanno muhiim ah lagu xoreeyay.
DHUUSOMAREEB, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya oo xalay ka qeyb galay, munaasabad soo dhaweyn ah oo loogu sameeyay caasimadda maamulkaas, ayaa ku dhawaaqay in loo diyaar garoobo dagaal xooggan oo ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab.
Xasan wuxuu caqabadda ugu weyn ee dib u dhigtay nolasha shacabka Soomaaliyeed ku tilmaamay, amni darrada iyo falalka arxan darrada ah ee ay soo maleegaan argagixisada Alshabaab, isagoo xusay in si wadajir ah loogu istaagi doono la dagaallanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha, ayaa hoggaanka iyo shacabka Galmudug ugu baqay in ay qeyb ka noqdaan guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida, kaasoo la doonayo in Mudug iyo Galgaduud hormuud u noqdaan howl-galka uu sheegay inuu billaaban doono.
“Muwaadinka Soomaaliyeed caawa gurigiisa in uu nabad ku gam’o ayaan rabnaa, marka uu safrayo oo uu waddada marayo goormaa miino kula qarxeysaa in aanu is dhihin baan rabnaa”, ayuu yiri Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Galmudug ayaa ka mid ah goobaha ay sida weyn ugu xooggan yihiin Al-Shabaab, iyaga oo gacanta ku haya saddex degmo oo maamulka muhiim u ah, kuwaas oo kala ah, Ceelbuur, Ceeldheer iyo Xarardheere iyo degaanno badan oo hoos taga degmooyinkaas.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay ma jirin howl-gal xooggan oo Dowladdii Farmaajo ku qaadday faraca Al-qaacida ee baraga Afrika, taasoo sababtay in Kooxdu culeys saaraan degaanno hore looga xoreeyay qaarkoodna dib ula wareegaan.
Xasan Sheekh ayaa kula dardaarmay madaxda dowladda iyo dadka Galmudug in ay ka digtoonaadaan khilaafaadka, quluubtana isu furaan oo ay gacmaha is-qabsadaan si ay horumar buuxa uga hirgeliyaan degaankooda, nolol wanaagsanna ugu abuuraan bulshada.
“Haddii ay dadku dhihi jireen, bus-ku waa buuxaa, meel laga fuulo ma leh, tareen aan dhammaaneyn baa taagan, aan tareenka wada raacno.” Ayuu hadalkiisa ku soo xiray Xasan oo socdaal uu ugu magac daray tareenka Nabadda ku jooga Dhuusamareeb.